SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuJapan Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Chii Chinonzi Chidzidzo cheBhaibheri?
Zvapupu zvaJehovha zvine urongwa hwokudzidzisa vanhu Bhaibheri hunopindura mibvunzo yakawanda, yakadai seyokuti:
Mwari ane hanya neni here?
Ndingavandudza sei wanano yangu?
Ndingaita sei kuti ndifare muupenyu?
Pasi apa uchawana mhinduro yemibvunzo inonyanya kubvunzwa nezveurongwa hwedu hwokudzidzisa Bhaibheri.
Chidzidzo chacho chinoitwa sei? Tinokurukura misoro yakadai sokuti “Mwari” kana kuti “wanano” uye tinoongorora mavhesi ari muBhaibheri akasiyana-siyana anoenderana nenyaya yacho. Kuenzanisa kwatinenge tichiita mavhesi kunoita kuti tione kuti Bhaibheri rinoti chii nezvenyaya yacho uye kuita izvi kuratidza kuti tiri kuita kuti Bhaibheri rizvitsanangure rega.
Kuti kudzidza uku kuve nyore, tinoshandisa bhuku raBhaibheri Rinotidzidzisei? Bhuku iri rinotsanangura zvakajeka zvinodzidziswa neBhaibheri nezvaMwari, Jesu, remangwana redu uye nedzimwewo nyaya.
Kudzidza Bhaibheri kunoita marii? Kudzidza hakubhadhariswi, uye mabhuku anoshandiswa pakudzidza haabhadhariswi.
Kudzidza kwacho kunotora nguva yakareba zvakadini? Vanhu vakawanda vanoronga kuti vave neawa kana kupfuura vhiki yoga yoga kuti tidzidze navo Bhaibheri. Asi nguva inotorwa pakudzidza inogona kuchinja. Tinogona kuchinja nguva yatinotora pakudzidza zvichienderana nenguva yemunhu.
Zvii zvinoitwa kana ndikakumbira kudzidza Bhaibheri? Kana ukakumbira kudzidza Bhaibheri, mumwe weZvapupu zvaJehovha achakushanyira panguva uye nzvimbo yakakunakira. Achakushanyira wacho achakuratidza kwemaminitsi mashoma madzidziro atinoita. Kana ukazvifarira, unogona kuenderera mberi.
Kana ndikabvuma kudzidza, ndinofanira kuzova mumwe weZvapupu zvaJehovha here? Kwete. Zvapupu zvaJehovha zvinofarira kudzidza Bhaibheri nevanhu, asi hatifi takamanikidza munhu kuti apinde chitendero chedu. Asi tinokurukura neruremekedzo zvinotaurwa neBhaibheri, tichiziva kuti munhu mumwe nomumwe ane kodzero yekusarudza chitendero chaanoda.—1 Petro 3:15.
Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chii Chinonzi Chidzidzo cheBhaibheri?
Ungaitei Kuti Unzwisise Bhaibheri?
Ndekupi Kwaungawana Rubatsiro Rwekuti Unzwisise Bhaibheri?
Kana Ndikadzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha, Ndinofanira Kuzova Mumwe Wavo Here?